Iimpawu ezi-Top Eight Cars ze '80s
Ukususa ii-albhamu zokuqala eziphambili ze -Cars (ngo-1978 i- The Cars kunye ne-1979 Candy-O) ekuqwalaseleni kuya kubonakala ngathi yinkinga enobungozi obukhulu, kodwa ukuhambisana kwebhanki ngexesha lokusebenza kwalo nje kweminyaka engaphantsi kwe-10 kuqinisekisa amaninzi ama-80s tunes angakhetha kuyo ukuba uluhlu olungcono. Ukudibanisa okungabonakaliyo kweRic Ocasek yokubhala ingoma kunye nezwi kunye neebhola zeGreg Hawkes kunye ne-Elliot Easton ityitya yabonakala ingenakunqandeka kubalandeli bomculo beli xesha. Nazi ezisibhozo zezona zizathu ezibalulekileyo, kutheni, ziboniswe ngokukhawuleza, ngokulandelelana kwexesha.
Iifoto zamazwe ngamazwe ngamazwe / iiNcwadi zeeNcwadi / i-Getty Izithombe
Ejongene nokuhlanjululwa kwe-synthesizer kunye nesingqungquthela esivumelanisayo, le ngoma evela kwi-Panorama ka-1980 iqala ngokuthakazelisayo. Kodwa kwi-style ye-Cars style style, ingoma ngokukhawuleza iya kuba yinto enye i-Ric Ocasek ingqiqo enomdla wokungcebeleka kwi-bridge. Eli qela elikhulu laseMerika lalifumana indlela yokuphakamisa ixesha elifanelekileyo ngokusebenzisa imimandla eyahlukileyo, kwaye ngale ndlela, i-alliot Easton yomelele kunye nekrejista yokudala i-solos ivelisa indlela eyahlukileyo kodwa eyamkelekileyo kulo mzila omhle. Ukuqala ngokuqinileyo ukuya kwiminyaka elishumi yokulawula umculo womculo.
I-Album Cover Cover Image ye-Rhino / Elektra
Ewe, uRic Ocasek wayengumbhali weengoma eziphambili zeVizi kunye nomqhubi wezwi, kwaye ngokuqinisekileyo waqhekeza unamandla xa ehamba ngelo xesha. Kodwa ndiyaqhubeka ndiphikisana ukuba le ngqatshulwa eyaziwayo, umzila wecandelo eliphuma kwi-band's hit 1982 release, liqhubela phambili kwi-fuel base yayo yesiseko esisezantsi, esinikwe emva kwexesha elide, uBenjamin Orr omkhulu, kunye nomsindo wayo, ukulawula isiginci e-Easton. Ngaphandle kwezi zinto zimbini, ndiyakubonisa ukuba ingoma iya kuncitshiswa ibe yinto encane engumtsha omtsha, ogqithisekayo kodwa ekugqibeleni ulandelelwano lwexesha. Mhlawumbi oko kukugqithisa imeko, kodwa ndicinga ukuba ubukhulu bemoto buhamba bunzulu kunokuba i-Ocasek igalelo elikhulu.
Njengomnye wezinto ezigqibeleleyo ezilishumi, le ngoma yayineemitha ezininzi ezivela kwizinto ezintsha xa ividiyo yomculo edlalwa ngoku ikhona njengento ebonakala ngathi iifomati zekhompyutha zakudala. Enyanisweni, umfanekiso wesicatshulwa wentloko ye-Ocasek ifakwe kwi-insects flying flying. Kodwa ingoma ngokwayo inokunikela ngokusuka kwindlela yokujonga, ngokukodwa kwi-Ocasek's stylized's, eccentric and spacey delivery voice. Ikhefu le-vocpella break in the middle of the track limela umzuzu 'wama-80', okhokelela ekuphindaphindiweyo kweengoma eziphindaphindiweyo, ukukhwaza okukhulu.
Nangona u-Ocasek wayegqoke ibhulukwe kule bhanki, naye wayenamandla okungaqhelekanga kwaye akwazi ukukhupha ngokugqithiseleyo kuye kwinqanaba elifanelekileyo ukwenzela ukuba alondoloze into ebalulekileyo yeqela. Le ngoma, enye yeempembelelo ezininzi ukusuka kwi-albhamu ye-1984 yokumshaya i-albhamu, ibonisa enye imeko enjalo, njengoko u-Ocasek wanikela i-Orr le ngoma yokucula, mhlawumbi ngenxa yokuba wayeqonda ukuba isitayela sokuthandana nesithandabuzo, esilungele ukulungeleka kangcono i-ballad enhle. Ngokuqinisekileyo, mhlawumbi wayenomsebenzi ongcono ukuba abe nomnene, efikelele kwi-80s supermodel uPaulina Porizkova ngeenxa zonke ngeli xesha nangona kunqongophala kwakhe kwisebe eliqhelekileyo.
Njengeengoma ezingathandekiyo zehlobo zihamba, azinakuphucula kangangoko kunje, nangona kwenzeka ukuba uphuze umkhuhlane weqhwa ungowaseMdala Milwaukee. Umxube weebhodi eziphambili kunye neengcingo zamandla zibeka ngokugqibeleleyo enye ye-Ocasek yokunikezela ngokugqithiseleyo kwindlebe ye-candy, apho inkokeli yeCosti ibonakala iyayiqonda kakuhle ibangela ibhuloho enkulu ye-tune ("Ikubambelele ..."). Kwaye nangona kukho ukulandelelana kobu bumnyama ngezinye iinkqubo kubakho kwizinto ezithile zebhanki, ukubonakaliswa kwengoma kubonwa kakuhle. Uhlobo lomculo we-pop wolwazi, lukhutshwe kungekho nongoyilo oluqhelekileyo oludibaniswa nobuqhetseba.
"Kutheni Ndingenako Ukuba Nawe?"
Umnikelo onjengophupha ubuyisela ezinye ze-quirky, isandi somhlaba weentsuku zangaphambili zebhanki, kunye nokuqhagamshelana kokulangazelela okukhulu kuphumelela ngamazwi angqalileyo kunye kunye nesingqungquthela esilungeleyo. Umsebenzi ka-Greg Hawkes uyingqungquthela ingoma kodwa uhlala eshiya igumbi elithile elithakazelisayo, elincinciweyo kwaye, ngokuqinisekileyo, i-Ocasek yodwa. Umgca "Baby" we-chorus uhambelanisa ngokugqibeleleyo ingoma entsha yomsindo, emva kwekhibhodi ekulungele ukukhupha i-synth yolondolozo kunye nemigca, okwenza le mzila ibe yintsika engaphantsi kwekhathalogu yeqela.
Le ngoma, enye yeminikelo embalwa yebhanti engazange ibonakale kwi-albhamu ye-studio, ihamba njengendlela enkulu yokuqokelela zonke iimboli kunye neenkcukacha zodwa zeeVikethi. Ukususela kwiibobho zebhodi ze-Hawkes ezibetha kunye nezohlukeneyo kwi-trademark ye-Ocasek, isitayela sezwi elisondeleyo, i-track ye-vocal vocal, lo mzila ubonakala uqala ukubonakala nje kumnandi. Kodwa njengesiqhelo, i-Easton iyigqabi, i-muscular i-guitar work chime kwixesha elifanelekileyo lokukhumbuza abaphulaphuli ukuba iiViksi ziyiqela elikhulu lamatye kunye nesenzo somdlalo. Ingqumbo yakhe apha iya endaweni yonke ngendlela engcono kakhulu kwaye ibuyisa ngokutsha ingoma yimbi enye.
Lo mzila we-1987 ukusuka kwiNgcango ukuya kwiNkundla, ingoma yeCosti edidayo yeVivili, mhlawumbi imele ibe yimizamo yokugqibela ephezulu yebhanki, njengoko u-Ocasek obonakalayo enomdla kwi-band iya kubangela ukuvakaliswa ngokusemthethweni kweqela leqela ekupheleni kuka-1988. Noko ke, iqulethe izinto eziqhelekileyo ezenza iqela elikhulu, ngokukodwa ngengqiqo yeengoma zomculo ezithembekileyo ezihlambulukileyo ezingenakukhunjulwa. Ukuba ibhanki inokuyilungisa le ngqumbo ngelixa lihamba ngendlela ephantsi, akufanele kubekho umbuzo kumgangatho wayo njengomgcini we-80s abalindi beli langatye. Akunjalo nabani na oya kuthi, nangoko.
Eziphezulu ze-10 U2 Iingoma zee-80s
Iingoma eziphezulu ze-10 X
Iingcebiso ezili-10 zokuthetha izinto ezilungileyo kwiKholeji yakho-umntwana otyunjweyo
I-Meredith College ye-GPA, iSAT kunye ne-ACT Data
IKhemishi yeKhemistri - Indlela yokwenza i-Peppermint Cream Wafers